प्रिमियर इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण(बुधवार, २२ फागुन २०७५)
विसं २०५१ वैशाख २९ गतेदेखि कारोबार शुरू गरेको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ५ करोड ८८ लाख नाफा कमाएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ८ दशमलव ८० प्रतिशत बढी हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानी ६८ प्रतिशत बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५८ करोड ४० लाख छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउन तोकेको अझै पुगेको छैन । रू. ४१ करोड ६० लाख रकम अपुग छ । रिजर्भ कोषमा रू. ६० करोड १० लाख छुट्याएको छ । यो रकम गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १ सय ९४ प्रतिशत बढी हो । बीमा कोषमा रू. ४३ करोड १ लाख जम्मा भएको छ । मंगलवार कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ३ अंक घटेर रू. १ हजार मा बन्द भएको छ ।
2019-03-06 - 68 view(s) - abhiyan